(Hadhwanaagnews) Sunday, January 06, 2019 14:31:06
Tartanka waxa lagaga qaybgalayaa oo tartameyaashu barnaamijyadooda ku salaynayaan saddexdan mawduuc midkood:
Ururka gabdhaha suxufiyiinta Somaliland ee WIJA oo ah urur aan dowli ahayn, kana shaqeeya horumarinta warbaahinta dalka iyo arrimaha haweenka, waxaa uu ogaysiinayaa gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta dalka ee ku nool dhamaan gobollada Somaliland in ay u qaban doonaan tartan ay ku soo bandhigayaan xirfaddooda.
Ururka WIJA oo kaashanaya hay’adda Mucaawimooyinka dalka Ingiriiska ee UK Aid, waxa uu ugu talogalay inuu tartankan ku abaalmariyo gabdhaha suxufiyiinta ah ee reer Somaliland, taasoo qayb ka ah dedaalada uu ururka WIJA ugu jiro kor u qaadista aqoonta gabdhaha suxufiyiinta sida; tababarada iyo dhiirigalinta uu markasta la barbar joogo gabdhaha ka hawlgala warbaahinta dalka ta dowliga ah iyo ta gaarka
Haddaba, shuruuraha tartanka waxa ka mid ah:
1. Tartanka waxa lagaga qaybgalayaa oo tartameyaashu barnaamijyadooda ku salaynayaan saddexdan mawduuc midkood:
· Waa in barnaamijku yahay mid ka hadlaya haweenka Somaliland iyo dhibaatooyinka ka hortaagan ka qaybgalka talada dalka.
· Waa inuu yahay mid ka hadlaya Gudniinka Fircooniga iyo dhibaatooyinkiisa iyo sidii loo dabar-goyn lahaa caaddo-dhaqameedkan.
· Ama inuu yahay mid ka hadlaya Tacadiyada ka dhan ka ah dadka nugulka ah, sida haweenka iyo caruurta.
2. Waxaa ay barnaamijyadu noqon karaan: mid qoraal ah (sida barnaamij wargeys ama website), mid maqal ah (sida barnaamij Idaacadeed) iyo mid maqal/muuqaal ah (sida barnaamij TV).
3. Ka qaybgalka tartanku waxa uu u furan yahay dhammaan gabdhaha suxufiyiinta ee ka hawlgala lixda gobol ee Somaliland.
4. Tartanka waxaa lagaga qaybgalayaa si keli-keli ah, lamana aqbali doono koox wax soo wada diyaarisa.
5. Waqtiga barnaamijku wuxuu noqon karaa:
· TV: mid aan ka badnayn 15 daqiiqo
· Radio: Mid aan ka badnayn 15 daqiiqo
· Wargeys ama Website: Qoraal aan ka badnayn 3 bog ama 1500 erey.
6. Barnaamijku waa inuu noqdaa mid cusub oo aan ka bixin idaacad iyo TV, laguna qorin wargeys iyo website midna.
7. Ka qaybgalka tartanku wuxuu furan yahay January, 1-31/2019, waana in tartameyaashu kusoo gudbiyaan hab electroonig ah. Barnaamijyada waxa ka qaybgaleyaashu ku soo dirayaan emailka: [email protected]
8. Marka uu ka qaybgaluhu barnaamijkiisa gudbinayo, waxa looga baahan yahay inay la socdaan magaca qofka oo dhammaystiran, telefoonka iyo emailka.
9. Abaalmarinta waxa la qaban doonaa horaanta bisha February 2019.
10. Waxa abaalmarinada heli doona saddexda qof ee ugu sareeya.
11. Ka qaybgaleyaashu wixii ay su’aal qabaan, waxay la soo xidhiidhi karaan ciwaanadan, inta ka horeysa 25 January.
· Tel: 063-3435332 ama 512413
· Xafiiska ururka WIJA ee magaalada Hargeysa oo ku yaala Fooqa Cimaarat Salaama, jidka Radio Hargeysa, degmada Gacan-libaax.
Halkan Guji Oo Dhagayso Fariintan Oo Cod Ah